कुन उमेरका महिलाको 'यौन सम्पर्क'प्रति रुचि कस्तो? यस्तो भयो खुलासा - Everest Dainik - News from Nepal
कुन उमेरका महिलाको ‘यौन सम्पर्क’प्रति रुचि कस्तो? यस्तो भयो खुलासा
एक नयाँ अध्ययनका अनुसार, महिला आफ्नो पार्टनरसँग मात्र १२ महिनामै सेक्सबाट बोर हुने गर्छन् । लामो समयसम्म सम्बन्धमा बसेपछि महिलाले सेक्सलाई त्यति महत्व दिदैनन् । क्यालिफोर्निया विश्वविद्यालय, सन फ्रान्सिस्कोका वैज्ञानिक र साउथह्याम्प्टन यूनिभर्सिटीका अध्ययनकर्ताले संयुक्त रुपमा उक्त अध्ययन गरेका छन् ।
अध्ययनकर्ताले लण्डनका ११ हजार ५ सय ८ जनामा गरेको अध्ययनमा महिलामा सेक्सप्रति रुची चाँडै नै समाप्त हुन्छ भने पुरुषमा सेक्सप्रति रुचि रहिहन्छ । अध्ययनमा ६ हजार ६ सय ६८ महिला र ४ हजार ८ सय ३९ पुरुषहरूलाई सहभागी गराइएको थियो ।
सहभागी सबै पछिल्लो एक वर्षदेखि आफ्नो पार्टनरसँग सक्रिय रुपले सेक्स गर्दै थिए । अध्ययनमा महिलामा सेक्स प्रति अधिकतम रुची केवल एक वर्षसम्म मात्रै रहन्छ ।त्यस पछि उनीहरू सेक्सबाट भाग्न खोज्छन् ।
तर पुरुषमा यस प्रकारको कुनै परिर्वतन आउँदैन । सेक्स लाइफबाट महिलामा तनाव कम अध्ययनकर्ताका अनुसार नियमित सेक्स गर्ने महिलामा तनाव कम हुन सक्छ । उनीहरूको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता पनि अन्यको तुलनामा बढी रहेको अध्ययनले देखाएको छ । यस्ता महिला लामो समयसम्म बाँच्ने पनि गरेका छन् ।
सातामा कम्तीमा एक पटक सेक्स गर्ने महिलामा उमेर बढ्न थाल्छ भन्ने तथ्य अध्ययनले सार्वजनिक गरेको छ । यस्तो छ अध्ययनको रिपोर्ट
उमेर बढ्दै जाँदा सेक्समा रुचि कम अध्ययनका अनुसार उमेर बढ्दै जादा सेक्सप्रति रुची कम हुँदै गएको छ । यो क्रम पुरुषमा भन्दा महिलामा बढी भएको पाइयो । विशेषज्ञका अनुसार यस्तो हुनुमा मोनोपज प्रमुख कारण हुन सक्छ ।किनकी त्यो समय हर्मोनल परिवर्तन अत्यधिक हुन्छ ।
केही विशेषज्ञका अनुसार अधबैंसे उमेरका महिलामा घर र बाहिर दुवैतिर बढ्दो उत्तरदायित्वले कमी आउन सक्छ । आमा बनेपछि सेक्समा रुची कम महिला जब आमा बनेपछि बच्चाका कारणले सेक्समा रुची घट्ने अध्ययनले देखाएको छ । अध्ययनमा सहभागी यस्ता ५० प्रतिशत महिलाले रुची देखाएका थिएनन् ।